March 28, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta, Warbixino 0
Puntlandnews.net (Nairobi)-Boqorka beelaha Daarood boqor Burhaan boqor Muuse oo ka kicitimay magaalada Qardho xarunta dhaqanka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya.
Boqor Burhaan boqor Muuse ayaa mudadii uu ku sugnaa magaalada Muqdisho kulamo la qaatay madaxda ugu saraysa dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, maamulka gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah isimada ugu caansan koonfurta Soomaaliya.
Xog hoose oo ay heshay Puntlandnews ayaa sheegaysa in boqorku uu kala hadlay madaxweynaha iyo isimada uu kulamada la qaatay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo isidii dhaqanku ay uga qayb qaadan lahaayeen dibu heshiisiinta umadda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa boqorka ka codsaday inuu ka caawiyo dibu-heshiisiinta umadda Soomaaliya, wacyigelinta iyo isu keenidda dhaqanka Soomaaliyeed si ay markale Soomaaliya ugu soo laabato meeqaamkii lagu yaqaaney.
Warar kale ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu boqorka latashi kala sameeyey shaqsiyaadka xilalka ka qabanaya safaaradaha iyo dowladda si loo helo dad u qalma inkasto ay jireen siyaasiyiin ay boqorka isku gobol ka soo jeedaan oo ku sugnaa magaalada Muqdisho.